ရှံဆုန်နှင့်ဒေလိလ - ကျမ်းစာပုံပြင်အကျဉ်းချုပ်
ရှံဆုန်နှင့်ဒေလိလ၏ပုံပြင် မှစ. သင်ခန်းစာများ
ဒါဟာကိုယ်နှိမ့်ချခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်အား Turn မှအရမ်းနှောင်းပိုင်းဘယ်တော့မှမဖွင့်
တရားသူကြီးမှတ်စာ 16; ဟေဗြဲ 11:32 ။
ရှံဆုန်သည် ယခင်ကမြုံဖြစ်ခဲ့သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှမွေးဖွားသူတစ်ဦးအံ့ဖွယ်အကလေးသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့မိဘရှံဆုန်သည်နာဇရိလူအပေါင်းတို့သည်သူ၏အသက်တာကိုဖြစ်ကြောင်းကိုကောငျးကငျတမနျအားဖွငျ့ကိုပြောသည်ခဲ့ကြသည်။ နာဇရိလူ, စပျစ်ရည်နှင့်စပျစ်သီးမှရှောင်ကြဉ်ဖို့သူတို့ရဲ့ဆံပင်သို့မဟုတ်မုတ်ဆိတ်မဖြတ်ဖို့, အသေကောင်များနှင့်အဆက်အသွယ်ရှောင်ရှားရန်အဘို့သန့်ရှင်း၏သစ္စာကိုယူ။ သူကြီးပြင်းအဖြစ်, သမ္မာကျမ်းစာ (တရားသူကြီး 13:25) သခင်ဘုရားကိုရှံဆုန်သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့် "သခင်ဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အတွက်နှိုးဆော်ဖို့စတင်ခဲ့" လို့ပြောပါတယ်။
သူတည်းဟူသောကြီးသို့ကြီးပြင်းအဖြစ်သို့သော်, ရှံဆုန်ရဲ့တပ်မက်ခြင်းအတိုင်းသူ့ကိုနိုင်။ မိုက်မဲသောအမှားများနှင့်မကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတစ်စီးရီးပြီးနောက်သူဒေလိလအမည်ရှိသောမိန်းမတဦးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။ Sorek ၏ချိုင့်ထဲကနေဒီမိန်းမနှင့်သူ၏အကိစ္စကသူ၏ပျက်စီးခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးနိဂုံးကို၏အစဟုမှတ်သားခဲ့သည်။
သူ့ကိုဖမ်းဆီးဖို့မျှော်လင့်, ဖိလိတ္တိလူခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးချင်းစီရှံဆုန်ရဲ့ကြီးမြတ်၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်မယ့်အစီအစဉ်အတွက်သူတို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဒေလိလကငွေတစ်ပေါင်းလဒ်ကိုကမ်းလှမ်း အစှမျးသတ်တိ ။ ဒေလိလနှင့်အတူလုပ်ကြံခြင်းနှင့်မိမိထူးခြားသောအခွက်ရူးနေပြီ, ရှံဆုန်လက်အဖျက်ကြံစည်မှုသို့သွားလာ၏။
သူကနောက်ဆုံးတွင်အလွန်အရေးပါသတင်းအချက်အလက် divulged သည်အထိ seductive နှင့်ပရိယာယ်၏သူမ၏အင်အားကြီးအသုံးပြုခြင်း, ဒေလိလဇွဲ, သူမ၏ထပ်ခါတလဲလဲတောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူရှံဆုန်ချဝတ်ဆင်။
ကလေးမွေးဖွားမှာနာဇရိလူသစ်စာဂတိပွု ယူ. , ရှံဆုန်သည်ဘုရားသခင့ခွဲထားခဲ့သညျ။ အဲဒီအဓိဋ္ဌာန်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, သူ့ဆံပင်အဖြတ်ခံရဖို့ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။
ရှံဆုန်သည်တစ်ဦးသင်တုန်းသူ၏ခေါင်းပေါ်၌အသုံးပြုခဲ့လျှင်သူ၏ခွန်အားကိုသူ့ကိုစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုဒေလိလပြောပြတဲ့အခါသူမကပရိယာယ်နှင့်ပြင်ဆင်ဖိလိတ္တိလူအုပျစိုးနှင့်အတူသူမ၏အစီအစဉ်ကိုလက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရှံဆုန်သည်သူမ၏ပေါင်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေစဉ်, ဒေလိလသည်သူ၏ဆံပင်ခုနစ်ပါးကျစ်ရိတ်ဖို့ Co-ပူးပေါင်းကြံစည်ခေါ်။
အဲဒီအစားသူ့ကိုသတ်ဖြတ်ထက်, ဖိလိတ္တိလူသည်သူ၏မျက်စိကိုထုတ်ဒေါကသူ့အားအရှက်ဖို့ပိုမိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုအောက် အလုပ်ကြမ်း တစ်ဂါဇာထောင်ထဲမှာ။ သူကစပါးကိုကြိတ်မှာ slaved ကဲ့သို့, မိမိဆံပင်ကြီးထွားဖို့စတင်ခဲ့ပေမယ့်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောဖိလိတ္တိလူနားမထောင်ဘဲ။ နှင့်သူ၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဆုံးရှုံးမှုတို့နှင့်ကြီးသောအကျိုးဆက်များ၏အပြစ်များကိုကြားမှ, ရှံဆုန်၏နှလုံးကိုယခုထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌လှည့်။ နှိမျ့ခမြှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်း - နှငျ့ဘုရားသခငျဟုလျှောက်ကြ၏။
တစ်ဦးအယူမှားယဇ်ပူဇော်ရိုးရာဓလေ့စဉ်အတွင်းဖိလိတ္တိလူဆင်နွှဲဖို့ဂါဇာအတွက်စုဝေးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ထုံးစံရှိသည်အတိုင်း, ထိုသူတို့ jeering လူအစုအဝေးဖျော်ဖြေဖို့ဗိမာန်တော်သို့မိမိတို့၏တန်ဖိုးထားရန်သူအကျဉ်းသား paraded ။ ရှံဆုန်သည်ဗိမာန်တော်၏နှစ်ခုအလယ်ပိုင်းထောက်ခံမှုတိုင်များအကြားမိမိကိုမိမိ braced အပေါင်းတို့နှင့်သူ၏တန်ခိုးကြီးခြင်းနှင့်အတူတွန်း။ နှိမ့်ချဗိမာန်တော်သည်ဗိမာန်တော်၌ရှံဆုန်သည်လူတိုင်းတခြားသတ်ဖြတ်, ရောက်တော်မူ၏။
ရှံဆုန်ရဲ့ တောင်းဆို မွေးဖွားထံမှဖိလိတ္တိလူဖိနှိပ်မှု (:5တရားသူကြီးမှတ်စာ 13) မှဣသရေလအမျိုးကိုကယ်တင်ခြင်းစတင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရှံဆုန်၏ဘဝ၏အကောင့်များနှင့်ဒေလိလနှင့်အတူသူ၏ပျက်စီးခြင်းကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါ, သငျသညျရှံဆုန်သည်မိမိအသက်ကိုဖြုန်းထင်လေ့မယ်။
သူကတစ်ဦးပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ တောင်မှနေဆဲ, သူသည်မိမိဘုရားသခင်-တာဝန်ပေးအပ်မစ်ရှင်ပြည့်စုံ။
တကယ်တော့ခုနှစ်, ဓမ္မသစ်ကျမ်း ရှံဆုန်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုစာရင်းပြုစုမထားဘူး, မအစွမ်းသတ္တိကိုမိမိမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပြုမူ။ ဟေဗြဲက "11 အမည်များသူ့ကို ယုံကြည်ခြင်းခန်းမ သူတို့တွင်" "အဘယ်သူ၏အားနည်းချက်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိလှည့်ခဲ့ပါတယ်, ယုံကြည်ခြင်းအားသိမ်းပိုက်နိုင်ငံတို့မှတဆင့်အုပ်ချုပ်တရားမျှတမှုနှင့်ကတိထားတော်ခဲ့ရာရရှိခဲ့ ... ။ " ဤသည်ဘုရားသခင့နေပါစေသူတို့ဘဝတွေကိုအသက်ရှင်နေထိုင်ပုံကို imperfectly ယုံကြည်ခြင်းကလူကိုအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုသထေူ၏။
ကျနော်တို့ရှံဆုန်နှင့်ဒေလိလနဲ့သူ့ရဲ့အရူးအမူးကိုကြည့်, သူ့ကိုယုံလွယ်သောစဉ်းစားပါလိမ့်မယ် - မိုက်မဲပင်။ ဒေလိလသည်မိမိတပ်မက်သောစိတ်သူမ၏မုသာစကားနှင့်သူမ၏စစ်မှန်တဲ့သဘောသဘာသူ့ကိုမျက်စိကွယ်။ သူဟာအကြိမ်ကြိမ်သူမ၏လှညျ့စားနည်းလမ်းတွေကျဆင်းသွားကြောင်း, သူမ ချစ်. ယုံကြည်ဖို့ဒါမှဆိုးဆိုးဝါးဝါးချင်တယ်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဒေလိလ "ကိုးကှယျ" သို့မဟုတ်ဆိုလိုတယ် "ကိုးကွယ်ဆည်း။ " ယနေ့ခေတ်ကဆိုလိုခြင်းငှါလာကြသိရပါတယ် "ဟု seductive အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ " နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဆီးမိုက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဇာတ်လမ်းသူမကတစ်ဖိလိတ္တိလူဖွစျကွောငျးကိုအကြံပြုထားသည်။
ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်, အမျိုးသမီးအားလုံးသုံးရှံဆုန်သည်မိမိ gravest ရန်သူများကိုဖိလိတ္တိလူတို့အားမိမိနှလုံးအပ်ပေးတော်မူ၏။
မိမိအလျှို့ဝှက်ချက်ထွက်ဆွဲဆောင်မှာပါဒေလိလရဲ့တတိယကြိုးပမ်းမှုပြီးနောက်အဘယ်ကြောင့်ရှံဆုန်အပေါ်မဖမ်းခဲ့တာလဲ စတုတ္ထဖြားယောင်းခြင်းအားဖြင့်, သူသည်အကျအဆုံးများ။ သူအတွက်ကိုပေး၏။ အဘယ်ကြောင့်သူသည်မိမိအတိတ်အမှားတွေကနေလေ့လာသင်ယူသည်မဟုတ်လော အဘယ်ကြောင့်သူသို့ပေးခဲ့ပါဘူး သွေးဆောင်မှု နှင့်သူ၏ရတနာဆုကြေးဇူးကိုအရှုံးမပေး? ကျနော်တို့တဲ့အခါမှာရှံဆုန်ရုံသင်နှင့်ငါကဲ့သို့သောကြောင့် အပြစ်တရားမှကိုယျ့ကိုယျကိုအပ် ။ သမ္မာတရားကိုကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြည်နယ်ထဲမှာကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူလှည့်ဖြားစေနိုင်သည်။
ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဟော ပြော. အရှံဆုန်သည်ဘုရားသခင်ထံမှခေါ်တော်မူ၏ရှေ့တော်၌ရှုံးနိမ့်နှင့်သူ၏အပ် အကြီးကျယ်ဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခု ကသူ့ချစ်ခင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုနှစ်သက်မှ, သူ့မယုံနိုင်စရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အား။ အဆုံး၌, ကသူ့ကိုသူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်မှောက်, သူ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သူ၏အသက်တာကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ ယုံမှားစရာမရှိသူအကျဉ်းထောင်၌ထိုင်သည်အတိုင်း, မျက်စိကန်းသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ၏ zapped ရှံဆုန်သည်တစ်ဦးပျက်ကွက်နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။
မျက်စိကန်းသောနှိမျ့ခသြောသူ၏အသက်တာ၏အဆုံးမှာရှံဆုန်သည်နောက်ဆုံးတွင်ဘုရားသခငျသညျအပျေါမှာမိမိအပြင်မှီခိုသဘောပေါက်လာတယ်။ အံ့သြဖွယ်ကျေးဇူးတော် ။ သူဟာတစ်ချိန်ကမျက်စိကန်းခဲ့ပေမယ့်ယခုကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျကွာဘုရားသခင်ထံမှပြိုလဲတော့ဘယ်လောက်ဝေးနေပါစေ, နေပါစေသင်ကျရှုံးခဲ့ဖူးပါတယ်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး, ကကိုယ့်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချခြင်းနှင့်ဘုရားသခငျသညျပွနျသှားဖို့သိပ်နောက်ကျဘယ်တော့မှပါပဲ။ နောက်ဆုံးတွင်, သူ့ယဇ်ပူဇော်သည်သေခြင်းအားဖြင့်, ရှံဆုန်သည်အောင်ပွဲသို့မိမိအစိတ်ဆင်းရဲအမှားတွေလှည့်။ ရှံဆုန်ရဲ့စံနမူနာကိုသင်စည်းရုံးစို့ - ဘုရားသခငျ့ပွင့်လင်းလက်နက်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့သိပ်နောက်ကျဘယ်တော့မှပါပဲ။
ယေရှု၏ 37 အံ့ဖွယ်
တစ်ဦးက New ကလေးများအတွက်သမ်မာကမျြးအခနျးငယျ
သမ္မာကျမ်းစာကိုရှံဆုန်သည်တစ်ဦးက Black က Man ခဲ့သလား
အဆိုပါ Synoptic ခရစ်ဝင်ကျမ်းအဘယ်အရာဖြစ်ပါသလား
ယေရှုရဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (: 27-33, Mark 11) မေးခွန်းထုတ်
ယောဟန်သည် "Dapper ဒွန်" Gotti
Angular အရှိန်အဟုန် Quantum နံပါတ်အဓိပ္ပာယ်
အဆိုပါ 2000 ပြည့်နှစ်များ၏အကောင်းဆုံးကျေးလက်မတ်ေတာသ Songs ရဲ့တစ်ဦးကအပြည့်အဝစာရင်း
"လွယ်ကူ" အိမ် Shots
အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကာတွန်းများအတွက် Boxer ပုန်ကန်
Harney Peak တက်ပြီး: တောင်ဒါကိုတာရဲ့အမြင့်မားသောပွိုင့်
(ထုတ်လုပ်) "Produire" Conjugate ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
"Ball ကိုအိပ်မနေပါနဲ့?" ဆိုတာဘာလဲ
နှိုငျးယှဉျ AIS ဘုတ်စီးနေသည် Apps ကပ: သင်္ဘော Finder ကို, မရိန်းယာဉ်အသွားအလာ, လှေ Beacon
Phylum Chordata - ကျောရိုးရှိသတ္တဝါနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များ
အခမဲ့ပရင့်ထုတ်ရန်အ Shape စာအုပ်
အိုမန် | အချက်အလက်နဲ့သမိုင်း
ဟာသအမျိုးသမီး Monologue - "ထိုဖာရောဘုရင်၏အနမ်း၏ကျိန်ဆဲ" မှ Veronica
High School တွင်ဓာတုဗေဒဆန္ဒပြ